UFryer uhlawula ingqalelo ekhethekileyo kumfanekiso kaLusifa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lo mfanekiso uqingqiweyo kaLusifa unokuba ngowona mboniso wobugcisa woyikekayo
Icawa yoBathathu Emnye eMarylebone, eWestminster, yenziwe ngokukodwa ukubhiyozela ukusweleka kukaNapoleonKhange isetyenziswe njengendawo yobugcisa ukusukela ngeminyaka yee-30, kodwa oku akukhange kumise umzobi uPaul Fryer ekufakeni umfanekiso oqingqiweyo owoyikisayo kaSathana ngaphakathi.
Isiqwenga, esithi "uLusifa", ngumfanekiso oqingqiweyo omele uMtyholi uxinekile kwiseti yeentambo. Lo mfanekiso unenani elifanayo lezinto ezintle nezintle, ezibonisa uLusifa njengesidalwa esimnyama esinamaphiko amakhulu amhlophe adalwe kwiintsiba zokwenene. Izama ukuveza imvelaphi yayo emsulwa kunye nendlela ukuwa kwayo emhlabeni kudlulela kwesona simnyama sobukho.
Kodwa yintoni enokunika nangaphezulu imvakalelo yokudakumba Kukule ndawo apho kubulelwa khona ngenxa yezo ntambo zigcina umfanekiso oqingqiweyo kwaye ziqhagamshelwe kwiifestile zeglasi ezonakeleyo zecawe uqobo.
Into engaziwayo yeyona njongo kaFryer yalo mzobo kwaye indawo ekuyo kule nkonzo. Ngapha koko, kufuneka sazi ukuba ayisiyiyo okokuqala ukuba esi sithuba sisetyenziselwe eminye imiboniso emasikizi efana naleyo inkawu ebethelelwe emnqamlezweni yavela embindini wecawa.
UPaul Fryer ngumculi owenzayo ingqalelo ekhethekileyo kumnyama kunye nobumnyama. Ukusuka kwiwebhusayithi yakhe sinokufumanisa ukuba ungumculi ongashiyi nabani na ongenamdla ngemifanekiso yakhe eqingqiweyo kunye noqikelelo oluchaphazela zonke iintlobo zezihloko, nkqu nezinye ezibuthathaka njengokuhlala kukaYesu Krestu kwisitulo somthi nesithsaba sezipikili entloko. .
Unayo iwebhusayithi yakho kweli qhagamshelo ukuqhubeka nomsebenzi wakhe kunye eminye yemiboniso yakhe oko kuyakuzama ukukuvuselela ngaphakathi kwaye wothuse izimvo zakho.
Ngezo ndawo zangaphakathi siya kwi-psychedelia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Lo mfanekiso uqingqiweyo kaLusifa unokuba ngowona mboniso wobugcisa woyikekayo
Asiyocawa. NguMarylebone omnye, indawo yomnyhadala.
IWoork Co, isitudiyo sokuyila saseSpain esinombono onomdla